eSIM: Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ya | Akụkọ akụrụngwa
eSIM: Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ya
Kaadi SIM, dika anyi siri mara ya rue ugbua, arụ oru di nkpa n’ime igwe mobipụ anyị. Na, ekele ya, amatara anyị dị ka ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ ụfọdụ wee nye anyị ohere ịnweta netwọkụ mkpuchi ya. Ka afọ na-aga Kaadị SIM na-adalata nha, Na-aga site na mini, micro na nano SIM, ruo ugbu a, na eSIM bịarutere ịgbanwe usoro ekwentị na ịnwe obere ohere na ngwaọrụ.
Ọzọ anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ya: ihe ọ bụ, ihe ọ bụ maka ya na ihe ndị ọrụ na-enye ya.
1 Kedu ihe bụ eSIM
2 Kedu ihe eSIM bụ?
3 Ndị ọrụ nwere eSIM
3.1 eSIM Oroma
Kedu ihe bụ eSIM
O nwere ike ịbụ na ị malitela ịnụ banyere eSIM ma ọ bụ SIM ọhụrụ na ọnwa ndị na-adịbeghị anya ebe ọ bụ na kaadị ọhụrụ a na-agbanwe ahịa ekwentị.
A na-ewere eSIM dị ka mmalite nke kaadị SIM nke anyị niile maara. Ọ bụ kaadị SIM ka ịchọta tinye n'ime smartphones onwe ha na na, n’ọdịnihu, a ga-etinyekwa ya na laptọọpụ, elekere amamịghe, mbadamba, na ngwa ọ bụla enwere ike ijikọ na netwọk ekwentị.
N'ihi eziokwu ahụ bụ na eSIM ga-etinye n'ime ngwaọrụ ahụ nakwa na ọ na-erughị nanoSIM ahụ anyị maara ugbu a, ndị na-emepụta ga-enwe ntakịrị ohere n'ime ngwaahịa ha, ọ bụ ezie na ọ gaghị adị oke oke.
Kedu ihe eSIM bụ?
Otu n'ime ihe ka ukwuu uru nke onyinye ohuru ohuru a nyere, bụ na ndị ọrụ ugbu a ga - ebelata oge ha na - anwale ụlọ ọrụ mgbanwe, Ebe ọ bụ na ọ gaghị adị mkpa ichere ịnwe SIM ọhụrụ nke ụlọ ọrụ nke anyị mere njem ahụ.
Uru ọzọ ọ na-enye bụ na ọ ga-adịkwa mfe ịgbanwe ọnụego site na ụlọ ọrụ gị ugbu a. Na mgbakwunye, ọ bụrụ n’ị na-eme njem mba ofesi, ịnwere ike ịgbazite ọnụego n’ebe ị na-aga ngwa ngwa. Site na eSIM ị ga-enwe ike ịnwe ọnụego gị na ngwaọrụ ọ bụla ị nwere site na ịgbalite ọrụ ahụ na nke ọ bụla n'ime ha.
Ndị a niile uru abụghị naanị maka onye ọrụ, nke doro anya na-eme ka ndụ dịkwuo mfe, ma na-echekwa oge na ego maka ndị na-arụ ọrụ, ndị nwere ike ilekwasị anya na imeziwanye ọrụ ndị ọzọ.
Ndị ọrụ nwere eSIM
N'ime ndị ọrụ niile anyị maara na Spain, naanị Vodafone na oroma bụ ndị nwere ọrụ eSIM nke ha. Ihe niile na-egosi na MoSistar si eSIM agaghị ewe oge iji tinye ya na ntinye ngwaahịa ya n'ime obere oge.
Orange bụ onye ọrụ izizi malitere eSIM na Spain, mana, n'oge ahụ, ọ bụ naanị otu ngwaọrụ dakọtara: the Huawei Lelee 2 4G. N'ihi eSIM, onye ọrụ oroma nwere ike jikọta nọmba ekwentị ya ma yabụ ọnụego ya na elekere smart a.
Dị ka ụlọ ọrụ onwe ya mara ọkwa, ha na-arụ ọrụ na-enye nke a mebere kaadị ọrụ na ọhụrụ iPhone ụdị: iPhone XS, iPhone XS Max, na iPhone XR. Ihe a niile nwere ebumnuche nke ime ka ndụ dịrị ndị ahịa ya mfe ma na-enye ha teknụzụ kachasị ọhụrụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ inweta Oroma eSIM, mbụ ị ga-emerịrị rụọ ọrụ MultiSIM nke nwere ego nke 4 euro kwa ọnwa. Ozugbo arụ ọrụ ahụ malitere, maka nke ọ bụla eSIM ịchọrọ ịrịọ, ị ga-akwụ ụgwọ euro 5.
Ihe niile si Vodafone site na nnukwu mmetụta, na nke a, yana ọrụ eSIM ya a na-akpọ OneNumber ọ gaghị adị iche. Vodafone eSIM ahụ ekwuwaala ọkwa n'oge na-adịbeghị anya, naanị mgbe ewebata ụdị iPhone ọhụrụ nke gụnyere eSIM.
Dị ka ọ dị n'ihe banyere oroma, ndị Vodafone eSIM nwere ụgwọ ọ bụla:
Maka ndị ahụ Ndị ahịa Vodafone nwere ọnụego L, XL, Otu L ma ọ bụ Otu XL, ọrụ a ga-abụ n'efu na ngwaọrụ mbụ ma ọ ga-efu euro 5 site na njedebe nke abụọ nke etinyere ya.
Maka ndị ahịa nwere ọzọ Vodafone ọnụego nke nkwekọrịta, ụgwọ ọrụ ga-abụ euro 5 na ngwaọrụ nke mbụ na nke abụọ.
Maka ndị ahịa OneNumber ọhụrụ, eSIM ga-akwụ ụgwọ euro 5 maka ịmalite otu ngwaọrụ ma ọ bụ abụọ.
Agbanyeghi na ha ekwuputala na ugbu a enweghi ozi banyere eSIM nke Movistar na-echegbu onwe ya, ihe kasị dịrị nchebe bụ na onye na-acha anụnụ anụnụ ga-amalite n'oge na-adịghị anya kaadị nke aka ya iji sonyere ndị asọmpi Vodafone na oroma.
Anyị chere mgbe ahụ na onye ọrụ na-acha anụnụ anụnụ ga-enye ndị ọrụ ya eSIM ọhụrụ ozugbo enwere ike. Ebumnuche bụ isi nke Movistar bụ mgbe niile ịnye ndị ahịa ya ngwaahịa kachasị mma ma mee ka ndụ ha dịkwuo mfe, dịka ngwaahịa ya bụ Aura Movistar.
Aura bụ onye nnyemaaka a na-amụta n'aka ndị ọrụ site na ozi enyere kwa ụbọchị. Site na teknụzụ a, ị nwere ike ịjụ Aura ozi ọ bụla gbasara akaụntụ Movistar gị site na ngwa ụlọ ọrụ yana zipu iwu na telivishọn na Movistar Plus.
Hụ na maka Movistar ihe mbụ bụ ndị ahịa ya na afọ ojuju ha, anyị ji n’aka na eSIM nke ya agaghị adị ogologo ọbịbịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » eSIM: Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ya
Ndị a bụ iPad Pro 2018 ọhụrụ